China OMASKA Custom Waterproof Large Capacity Diaper Bag for Foldable Baby Bed Travel Mommy Diaper Bag Backpack #HS2083 Manufacturer and Supplier | Omaska
Kitapo mandeha an-tongotra
Omaska ​​dipaer kitapo vehivavy...
OMASKA multifunctional water...
OMASKA Custom Waterproof Large Capacity Diaper Bag ho an'ny Fandrian'ny Zaza Afovoany Travel Mommy Diaper Bag #HS2083
Ampahany : HS2083#
Habe: 31.0 × 25.0 × 43.0CM
Lanja: 1.2 KGS
Fonosana: polyester 210D
20 pcs isaky ny baoritra, baoritra habe 50x60x70CM, 20kgs isaky ny baoritra
OEM/ODM baiko (amboary logo)
50% T / T ho petra-bola, ny fifandanjana alohan'ny fandefasana
Ahoana no mifidy kitapo diaper kitapo?
Fifantenana fomba Misafidiana kitapo diaper style messenger raha tianao ny kitapo kely kokoa sy voalamina. Matetika ny kitapom-pitondra hafatra dia misy tady lehibe mipetaka amin'ny 1 amin'ny sorokao. Misafidiana tote raha te harona lehibe kokoa misy toerana malalaka ianao. … Mifidiana kitapo kitapo raha te hampifandanja ny lanjany ianao. … Miverena mpamorona raha zava-dehibe aminao ny kitapo mihaja. …
Ny kitapo diaper (na kitapom-batana) dia kitapo fitehirizana misy paosy maro izay malalaka tsara hitondrana diaper sy ireo zavatra rehetra mifandraika amin'ny zazakely rehefa mandeha mianakavy.
Fampiasana Travel/Laptop/Isanandro/Business Fonosana vokatra (1) PP kitapo + baoritra (2) azo namboarina
Pricing fe-potoana EXW, FOB, CNF, CIF, DDU, sns Fepetra fandoavam-bola T/T, Western Union, L/C
Port de Loading TIANJIN, CHINA Andininy momba ny fandefasana Amin'ny ranomasina/rivotra/tany/express
Sample Time 1. kitapo mahazatra: 3-9 andro Fotoana fitarihana famokarana 500-1000 : 20-25 andro
1K-5K: 25-35 andro
5K-30K: 35-45 andro
2. kitapo sarotra: 9-14days >30K: mihoatra ny 45 andro
kitapo sarotiny: horesahina misaraka
1) Top 10 R&D oriented mpanamboatra kitapo hendry
2) 21 taona mpanamboatra natokana ho an'ny fampandrosoana marani-tsaina backpacks
3) MOQ kely hanohanana mpanjifa vaovao
4) Fandefasana haingana ASAP
OMASKA BRAND FAMPIDIRANA
Filozofia orinasa OMASKA: Miaraka amin'ny sehatray hanomezana fahafaham-po ny olona bebe kokoa Miaraka amin'ny vokatray mba hahasoa ny mpanjifa bebe kokoa
Fanahin'ny orinasa:Manao ny vokatra rehetra amim-pitandremanaManompo amim-pitandremana ny mpanjifa
Ny iraka ataontsika:Manamora ny dia mba ho mpamatsy entana sy kitapo tsara indrindra
1) Ekipa matihanina hanompo anao: efa nanompo orinasa 1580
1) Fahombiazana: 8 ora ho an'ny santionany sy 7 andro fanaterana entana (faingana indrindra)
2) 3 andro fanavaozana iray ho an'ny fivoaran'ny baiko.
3) E-mail valiny ao anatin'ny 3 ora (fotoana fiasana).
4) Ataovy ny santionany mandra-pahafa-po.
5) Omeo fandaharam-potoana sy sary ny famokarana mba hitazomana anao hatrany ny sata famokarana.
6) Santionany sambo ho an'ny fanamarinana alohan'ny famokarana faobe.
7) azo antoka ny fandefasana ara-potoana.
1) 15 andro fe-potoana demurral kalitao.
2) 365 andro fifanakalozam-bola antoka.
3) Manolora toro-làlana ara-barotra.
4) Isaky ny telovolana, famoahana vokatra iray.
F: Ohatrinona ny famandrihanao kely indrindra ho an'ny kitapo?
A: MOQ dia 600pcs / design, fa hiezaka izahay hanohana raha latsaky ny 600pcs / design.Ho an'ny loko na ny lamina, matetika ny MOQ dia 300pcs / loko (modely).
F: Inona no karazana fampahalalana tokony homena raha mila ny vidiny / teny ho an'ny kitapo aho?
A: Order Quantity, Customized logo sy ny hafa fepetra, Price teny (EXW, FOB, CIF sns) sy ny hafa fepetra raha manana.
F: Azonao atao ve ny manamboatra ny kitapo araka ny endrika na santionany manokana?
A: Eny, afaka manome serivisy OEM na ODM izahay araka ny filan'ny mpanjifa samihafa, manana traikefa manankarena sy matihanina amin'ny filaharana namboarina izahay, noho izany dia afaka mampifanaraka tanteraka ny vokatra amin'ny endrika na santionany izahay, ary manome soso-kevitra hanampy anao. ny orinasanao hamahana fanontaniana na olana matihanina mifandraika amin'izany.
F: Inona no tombony amin'ny orinasa OMASKA valizy & kitapo?
A: Ny vokatra vita amin'ny fitaovana fiarovana ny tontolo iainana;
Ny ekipa matihanina izay nanompo orinasa / mpaninjara / mpivarotra marika 1,250 mba hanompo anao;
8 ora fanaterana santionany sy 7 andro fanaterana entana;
Miaraka amin'ny traikefa matihanina 15 taona amin'ny famolavolana vokatra kitapo marani-tsaina.
F: Tsy manana ny endriny manokana ho an'ny kitapo. Afaka manaiky ny baiko ODM ve ianao?
A: Eny, manana ekipa mpamorona manana traikefa manankarena amin'ny famolavolana kitapo, mba hahafahantsika manome serivisy ODM araka ny takian'ny mpanjifa fa ny vidin'ny famolavolana mety ho an'ny kitapo dia tokony aloa.
F: Afaka manana santionan'ny kitapo ve aho mba hojerena?
A: Eny, tsy misy olana. Afaka manome ny santionan'ny kitapo kitapo izahay.
F: Inona ny fe-potoana fandoavam-bola?
A: T/T, Western Union, L/C, Alipay, Wechat mandoa, O/A
F: Aiza ny OMASKA valizy & kitapo kitapo?
A: Ny anay OMASKA valizy & kitapo kitapo dia ao amin'ny faritanin'i Baigou, ao Shina.
teo aloha: OEM/ODM China Hiking Bag - Omaska ​​Custom Printed Logo 15.6 Inch Lightweight Laptop Shoulder Bag miaro Vertical Laptop Bag #CH30115 – Omaska
Manaraka: OMASKA Stok efa vonona Korea Kitapo diaper Bolsa de panales Stok Vonona Famolavolana fanontam-pirinty Korea Baby Mommy Nappy Bag Diaper Backpack#21062
OMASKA Diaper Bag Backpack miaraka amin'ny Changi Portable...
Ny kitapo Neny dia natao manokana sy novokarina ho fanamorana ny fikarakarana ny zazakely sy ny zaza madinika. Ny vokatra avy amin'ny zazakely, ny zaza madinika ary ny reny dia apetraka ao anaty kitapo misaraka mba hanomezana fahafaham-po ny reny amin'ny famoahana ny zanany. Fepetra ara-barotra Fampiasana Travel/Laptop/Isanandro/Business Product Pack (1)PP kitapo+carton(2)Azo amboarina Pricing Term EXW, FOB, CNF,CIF, DDU, etc Payment Terms T/T, Western Union, L/C Port of Loading TIANJIN, CHINA Deta...
Hijery vokatra bebe kokoa >
Omasak backpack orinasa manolotra laptop backpa...
Azo antoka ve ny kitapo finday? Aza esorinao loatra ny kitaponao: Na dia voaaro aza ny solosainao amin'ny toerana misy azy, dia mety hiteraka olana ihany ny fahasimban'ny kitaponao. Mety ho tapaka na rava ny tady, ary mety ho triatra ny fanambanin'ny kitaponao raha mavesatra loatra ianao. Ny orinasa mpanamboatra kitapo matihanina dia manoro ny kitapo finday 15.6 mirefy ho an'ny lehilahy vehivavy kitapo solosaina Fepetra ara-barotra Fampiasana Travel/Laptop/Isanandro/Business Product Pack (1) PP kitapo + baoritra (2) Azo amboarina Pricing Term EXW, FOB, C...
OMASKA Smart Backpack ho an'ny Travel Bagpack Me...
Azo antoka ve ny kitapo finday? Aza esorinao loatra ny kitaponao: Na dia voaaro aza ny solosainao amin'ny toerana misy azy, dia mety hiteraka olana ihany ny fahasimban'ny kitaponao. Mety ho tapaka na rava ny tady, ary mety ho triatra ny fanambanin'ny kitaponao raha mavesatra loatra ianao. Ny orinasa mpanamboatra kitapo matihanina dia manoro ny kitapo finday 15.6 mirefy ho an'ny lehilahy vehivavy kitapo ordinatera Fepetra momba ny varotra Fampiasana Travel/Laptop/Isanandro/Business Product Pack (1) PP kitapo + baoritra (2) Azo amboarina Pricing Term EXW, FOB,...
2021 OMASKA 12pcs 16pcs set 005# mafana mivarotra CK...
Loko misy ny vokatra: Mainty, volafotsy, manga, volomparasy, l.volamena, maitso Haben'ny vokatra 18″19″20″21″22″23″24″25″26″27″28″29″ Lanja Net 32.6KGS 33.6KGS Departemantan'ny Unisex Logo Omaska ​​na logo namboarina Laharana modely SZ005# MOQ 370sets = 1X40HQ container Best Sellers Rank 005# Warranty & Support Product Warranty: 1 taona 2021 OMASKA 12pcs 16pcs napetraka mafana amidy CKD (semi ...
2021 OMASKA FIRENENA VAOVAO TSX21016 VOALOHANY AZY QU...
Information momba ny vokatra Loko misy: Mainty, Grey Item NO.: TSX21016# Habe: 30x19x46CM NW: 0.85 KGS GW: 0.95 KGS Departemanta: Unisex-olon-dehibe Logo: Omaska ​​na logo namboarina MOQ 600 pcs Best Sellers Rank TSX21016# Warranty & Support Product Warranty 1 taona 2021 OMASKA VAOVAO FARANY TSX21016 WHOESALE AVY AVY AMBONTSIKA kitapom-barotra avo lenta miaraka amin'ny ampahany azo itarina hanampy amin'ny fametrahana zavatra bebe kokoa ao anatin'ny kitapo kitapo Business miaraka amin'ny bulckes 2 ho an'ny ...
Meinaili 2019 marani-tsaina USB fiampangana seranan-tsambo nylon custo ...
Loko misy ny vokatra: Mainty, volondavenona, manga Haben'ny vokatra 31*15*45CM Lanja entana 1.9 kilao Lanja lehibe 2.0 kilao Departemanta unisex-olon-dehibe Logo Omaska ​​na Logo namboarina Laharana modely 1801# MOQ 600 PCS Best Sellers Rank 1805#, 1807# , 1811#, 8774#, 023#,1901# Warranty & Support Product Warranty: 1 taona Ity fonosana avy any Omaska ​​ity dia manana singa ara-pandaminana mahagaga noho ny lanjany maivana (latsaky ny roa kilao). Misy padded la...
12, Yanling Road, West Xingsheng Street, Baigou Town, Baoding, Hebei, Sina (Tanibe)